Bini'aadanka iyo kuwa loo yaqaan 'Chatbots': Kumaa Maamuli doona Daryeelka Macaamiisha? | Martech Zone
Sabtida, Janaayo 12, 2019 Sabtida, Janaayo 12, 2019 János Szabó
Ku soo noqo 2016 markii dadka caanka ah ay caan noqdeen qof walbana wuxuu dhahay waxay badalayaan wakiilada aadanaha ee waaxaha daryeelka macaamiisha. Ka dib markaan ururinay 2.5 sano oo khibrad ah oo ku saabsan sheekooyinka 'Messenger chat' xaqiiqadu waxay umuuqataa waxyar maanta.
Su’aashu ma ahan chatbootyada oo badalaya bini’aadamka, laakiin waa sidee sida haasaawaha ay ula shaqeyn karaan bini’aadamka oo gacmaha is haysta.
Teknolojiyada 'Chatbot tech' waxay ahayd ballanqaad weyn bilowgii. Sheegasho si looga jawaabo su'aasha macaamiisha qaab wadahadal ah, iyo in la siiyo bini'aadamka sida caawimaadda xaaladaha isticmaalka soo noqnoqda. Waxaa soo baxday in tikniyoolajiyadda ay hadda ku sugan tahay aysan ku noolaan karin ballantan. Chatbots waxay la shaqeeyeen 70% heerka guuldarada,taasoo ka dhigtay su'aalaha macaamiisha jawaabahooda oo abuuray khibrad macmiil oo xun.
Facebook si dhakhso leh ayuu uga falceliyay oo u habeeyay waxyaabaha laga filayo sheekooyinka. Halkii aad u isticmaali laheyd wada hadalka qoraalka furan wada hadalada chatbot waxaa lagu dhiiri galiyay inay dhisaan isdhexgal ku saleysan qaanuunka. UX waa loo fududeeyay asal ahaan macaamiisha ku dhajinaya badhamada kala duwan ee ku jira Messenger UI. Facebook ayaa joojisay adeegsiga erayga chatbot oo hadda waxay ugu yeertaa botan badhanka is-dhexgalka ah waayo-aragnimo farriin. Tallaabadan, doorka sheekooyinka ayaa sidoo kale laga beddelay maareynta wadahadallada iyadoo loo marayo abuurista is-adeegyo (IVR like) kanaallo loogu talagalay su'aalaha macaamiisha Tier 1.
Hawsha ugu weyn ee loo yaqaan 'chatbots' waxay ka wareejisay daryeelka macaamiisha dhanka howlaha la xiriira suuqgeynta. Chatbots waxay maanta u shaqeeyaan barta ugu horeysa ee macaamiisha lagala xiriiro waxayna ku tiirsan yihiin faragelinta aadanaha mar haddii macaamilku u baahan yahay mid aad u adag.
Oo waxaan u maleynayaa inay caadi tahay sidaas oo kale!
Mustaqbalka Daryeelka Macaamiisha ee Wadahadalka ku saleysan
Mustaqbalka wada hadalka ku saleysan daryeeka macaamiisha wuxuu noqon doonaa xalka isku dhafka ah halka booska ay ku yaalliin safka hore dadkuna ay yihiin (inta badan la isticmaalo) dib u soo kabashada.
Bootooyinku waxay si firfircoon ula xiriiri doonaan macaamiil aad u tiro badan, bini'aadamkuna wuxuu la macaamili doonaa tilmaamaha u qalma.
Bootooyinka ayaa ka caawin doona macaamiisha inay ku dhex wareegaan Su'aalaha la Isweydiiyo sida dukumiintiyada, bini'aadamkuna wuu tallaabsan doonaa haddii su'aasha macaamiisha ay aad u adag tahay.
Bootooyinku waxay soo bandhigi doonaan habab aad u wanaagsan oo ah soo saarista badeecada, waxay ku taageeri doonaan iibinta qaab cabir leh bina aadamkuna waxay la macaamili doonaan wada hadalka daryeelka macaamiisha.
Waa wax dabiici ah in shirkaduhu ay dareemaan inay damacsan yihiin in ay dalbadaan sheeko xayeysiisyada marka la barbar dhigo qiimaha qaaliga ah ee badanaaba isbedelaya shaqaalaha. Oo waa caadi in la otomateeyo howlaha iyo wada sheekaysiga aan u baahnayn naxariis aadanaha. Laakiin damqashada aadanaha si otomaatig ah looma sameyn karo. Fursadaha ugu muhiimsan ee koritaanka sumadda waxay ku nasan tahay dhisidda xiriir shucuur leh macaamiisha iyadoo loo marayo khibrad shaqsiyeed. Haddii macaamilku dareemo daryeel shaqsiyeed isaga ama iyadu waxay u badan tahay inay mar kale iibsadaan. Kordhinta qiimaha iibka macaamiisha, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dukaamada aad iibsatay ay dib ugu soo laabanayaan marar badan.
"… Fiican" ayaa ka weyn "dhakhso badan"
In kasta oo macaamiisha dareemay in summad bixinayso adeeg deg deg ah, ay lix jeer uga badan tahay in si aad ah loogu hawlan yahay. Macaamiisha siiyay sumadda qiimeyn wanaagsan oo ku saabsan arrimaha "dadka" (sida ixtiraamka wakiilka daryeelka macaamiisha iyo rabitaankiisa ku caawinta) waxay ahaayeen sagaal jeer oo ay u badan tahay inay si buuxda ugu hawlan yihiin.
Caqabada ayaa ah hel dheelitirka u dhexeeya hal-abuurnimada iyo ku habboonaanta. Fure u ah inaad dhoola cadeyso macaamiishaada wajiga waxay ku saabsan tahay helitaanka isku dheelitirnaan sax ah oo udhaxeysa howlaha otomaatigga ah iyo daryeelka shakhsi ahaaneed.
Nasiib wanaagse, sheybaaraduhu ma ahan sida kaliya ee ay tikniyoolajiyaddu u caawin karto aadanaha. Waxaa jira siyaabo fudud oo lagu kordhin karo waxsoosaarka wakiillada aadanaha taas oo kordhinaysa wadarta guud ee daryeelka shakhsi ahaaneed ee wakiilka wadahadalka uu siin karo macaamiisha.
Saameynta adeegsiga AI ee adeegga macaamiisha bulshada waxaa laga yaabaa inaysan horseed u noqon hoos u dhaca guud ahaan shaqooyinka adeegga macaamiisha. Taabadalkeed, magacyadu waxay adeegsan karaan waxsoosaarka kordhay si ay u bixiyaan adeeg aad u sarreeya oo leh cabbir kooxeed la mid ah. AI waxay ka caawisaa wakiilka wadahadalka dhammaan aqoonta asalka ah ee lagama maarmaanka u ah inay ka jawaabto su'aalaha macaamiisha oo aad u horumarsan.
"AI wuxuu noqon doonaa tiknoolajiyad miis, oo muhiim u ah shirkad kasta oo dooneysa inay sii ahaato mid ku tartameysa goobta adeegga macaamiisha."
Barashada mashiinka waxay ku kordhin kartaa awooda wakiilada wadahadalada qaab iyaga u saamaxaya inay wali sii hayaan carada shaqsiyan. Hadafkeena Chatler.ai waa inaan ilaalino waqtiga wakiilada wada sheekaysiga, adoo ka dhigaya aqoonta lagu sheekeysto mid la heli karo, waxaanna kugula talineynaa jawaabaha ugu haboon ee wakiilada wada sheekaysiga su'aalaha macaamiisha soo galaya. Chatler.ai wuxuu badalaa wax soo saar la'aanta iyo soo noqnoqoshada "hel-nuqul-dhaji" shaqada ee wakiilada wada sheekaysiga iyadoo lagu samaynayo shaqada qaadista culus halkii aadamaha lagaheli lahaa. Algorithms-yada casriga ahi waxay falanqeyn karaan taariikhda sheekaysiga waxayna kugula talin karaan jawaabaha su'aalaha badanaa la isweydiiyo. Bini'aadamku waxay sameeyaan go'aanka ugu dambeeya waxayna ku daraan taabashada shakhsi ahaaneed farriin kasta iyagoo hubinaya in macaamilku dareemo qadarin. Tikniyoolajiyadda barashada mashiinka Chatler.ai waxay ka caawineysaa noocyada bixinta jawaabaha daryeelka macaamiisha si dhakhso leh, sax ah, oo isdaba joog ah.
Iyadoo Chatler.ai waxaad maarayn kartaa tirada sii kordheysa ee wadahadalada daryeelka macaamiisha ee aad isla kooxdan wada leedihiin. Aadamuhu ha u daayo wada hadalka muhimka ah. Aynu kuu oggolaanno inay kaa caawiso xitaa haddii sheekooyinku ku dhegan yihiin.
Raadi wax badan oo ku saabsan sida Wadahadal ayaa kaa caawin kara maanta inaad gaarsiiso khibrad macmiil oo weyn oo aad u kordhiso daacadnimada macaamiisha iyo iibsiga.
Saxiix Account Account Bilaash ah
János Szabó waa khabiir istiraatiijiyad dijitaal ah iyo khabiir isgaarsiineed. In kabadan 10 sano oo khibrad wakaalad xayeysiin ah, wuxuu abuuray barnaamij isgaarsiineed oo muuqaal ah oo in kabadan 2million soo degsada. Maanta, János wuxuu hogaaminayaa kooxda Chatler, AI ee macaamiisha daryeelka.